Cuntooyinka Lasiiyo Ilmaha 6 bilood jirka ah? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Ilmuhu Marka ay lix bilood gaaraan. hooyada waxaa laga rabaa in ay u bilowdo cuntooyinka nuucyadooda kala duwan. Waa in loo diyaarsho cuntooyin kala dugan oo nafaqo leh suu cunigu u noqdo mid jirkiiso iyo maskaxdiisaba kobacdo.
Habka loo diyaariyo cuntooyin nafaqo leh.
1. Ukari baradho: Markay jilicdana u burburi. Kadibna afka umar mari intuu ka baranayo oo kala qabsanayo cuntada.
2. Karootada iyo tufaaxa: Karootada iyo tufaaxu waxay kamid yihiin khudaarta faa’idadeeda aan la soo koobi karin wax tar fiicana uleh cuniga. Tufaax iyo karooto la shiiday waxaa cuniga uga dhigi kartaa qado. Kuna siinayo qaando.
3. Bariis cade: Bariis cade la kariyay ayaada siin kartaa adigoo ku jilcinayo caano nuucii aad heli karto.
Habka diyaarinta: Nadiifi bariiska kadibna ku shub biyaha markay karkaraan kana sug intuu jileeca ka noqonayo.
4. Ukun iyo baradho: Isku kari ukuniyo baradho kadibna buruburi oo isku rasiimi. Kadib cuniga afka ugalgali.
Talooyin ku saabsan quudinta ilmaha lixda bilood jirka ah: U diyaari cunnooyin nafaqo leh dhallaanka celcelis ahaan 1-2 jeer maalin kasta. Sii cunuggaaga isla cuntadaas ugu yaraan saddex maalmood, ka dibna u badal nuuc kale ee cuno ah. Sidoo kale waa in aada cuniga siiso caano ku filan si uu uhelo koritaan fiican.
Ku billow inaad siiso khudaarta nuucyadeeda kala duwan, sida miraha, maxaa yeelay khudaarta waxaa ku yar sonkorta. Waxay faa’iddo ulee dahay ilmaha.
Tags: Cutooyinka Lasiiyo Ilmaha lix bilood jirka ah?
Next post Qaabka Ugu wanaagsan ee ilmaha loo seexiyo?
Previous post Faylosoof Aristoteles (384-322 BC.)